Madagasikara : Nahaton’ny fanjakana ny fandaharana fanta-daza “Karajia” · Global Voices teny Malagasy
Madagasikara : Nahaton'ny fanjakana ny fandaharana fanta-daza “Karajia”
Voadika ny 18 Janoary 2008 19:26 GMT
Ny namana Jentilisa monina any Antananarivo, no nitatitra ny “fanafoanana” [suspension hoy ny fandaharana hafa] izay noraisin'ny fanjakana hihàtra amin'ny fandaharana fanta-daza “Karajia” izay mpandeha maraina ao amin'ny radio Katôlika Radio Don Bosco [afaka miantso sy milaza mivantana izay heviny ny mpihaino]. Notaterin'ny fandaharana “kidaona maraina” izay fatra-pihaino sady mpandeha ao amin'ny onjam-peo mpifaninana Radio Television Analamanga (RTA) koa izany zava-miseho izany. Manolotra ny fanazavany sy ny fijeriny i Jentilisa :
[… fitaovana] tadiavina entina hanaikana ny olona hilahatra no antony. Olona mpihaino iray moa no nanao izay fitenenana izay ary efa novalian'ny mpanentana io saingy iny no fanararaotran'ny mpitondra hanakatonana azy. Miasà mafy ny Mpamaham-bolongana rehetra fa mandady ny trambo. Mety ho anjarantsika ihany koa ny manaraka, ary mety hisy ny fanakanana ny aterineto raha mitohy izao.
Miarahaba antsika rehatra zay mpamaky forum ny tenako mba hamela hafatra kely ny tenako ny @ fanapahana ny fandaharana « KARAJIA » tao @ Radio Don Bosco zay hita fa tsara ary afahana maneho hevitra malalaka tokoa .
Zavatra hany mba tiako ho ambara de zao tsy mbola mahay miaina ao anatin’izany demokrasia zany ny malagasy na dia lazaina aza fa manjaka ny demokrasia eto madagascar nefa nahoana no nakatona ny karajia zay hita tokoa fa afahana maneho hevitra ankahalàlana afahana manatsara ny zava-hita fa tokony hampandroso ny firenena ka amiko raha nahaton’ny fanjakana ny fandaharana noho izany tsy mahatanty kritika zany fanjakana tsy afaka mihaino ny feon’ny vahoaka.
Zay ihany no zavatra kely mba tiako ambara.
22 Janoary 2008, 06:07
Misaotra anao amin’ny filazan-kevitra e! mety mbola hitohy moa izany ity tantara ity raha ny fitrangan-javatra amin’izao fotoana izao no jerena.
24 Janoary 2008, 09:21